GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bengali Bislama Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Gujarati Hebrew Hiligaynon Hindi Hungarian Icelandic Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kannada Kikaonde Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Lingala Lithuanian Luvale Macedonian Malagasy Malayalam Marathi Myanmar Nepali Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swahili (Congo) Swedish Tagalog Tahitian Tamil Telugu Thai Tigrinya Tok Pisin Tsonga Turkish Twi Ukrainian Urdu Vietnamese Waray-Waray Xhosa Yoruba Zulu
ISIOKWU TETA! A | IHE ISE Ị GA NA-EME KA AHỤ́ NA-ADỊ GỊ MMA
E NWEGHỊ onye chọrọ ịna-arịa ọrịa n’ihi na ọ na-efu ego, na-akụsasịkwa mmadụ ahụ́. Mmadụ na-arịa ọrịa, nsogbu ya abụghị naanị na ahụ́ agaghị akpakọcha ya ọnụ, kama ọ gaghị agali ọrụ ma ọ bụ akwụkwọ. Ọ gaghịkwa enwe ike ịrụta ego ma ọ bụ lekọta ezinụlọ ya. Ọ bụdị ndị ọzọ ga na-elekọta ya. Ego ọgwụ ma ọ bụ ego ụlọ ọgwụ nwekwara ike ibu ibu.
Ndị mmadụ na-ekwukarị na mgbochi ọrịa dị mma karịa ọgwụgwọ ya. Ọ bụ eziokwu na e nwere ọrịa ndị anyị na-agaghị agbata n’ọsọ, ma e nwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike ime ka anyị ghara ibute ọrịa ma ọ bụ ka ọrịa ghara inye anyị nnukwu nsogbu. Ka anyị leba anya n’ise n’ime ha.
1 NA-ADỊ ỌCHA MGBE NIILE
Ndị na-arụ n’otu ụlọ ọgwụ dị n’Amerịka kwuru na otu n’ime ụzọ mmadụ ga-esi gbochie ọrịa ma ọ bụkwanụ ghara ikesa ya bụ ịkwọ aka. Mmadụ nwere ike iburu azụ̀zụ̀ ma ọ hịọ aka ruru unyi n’anya ma ọ bụkwanụ tinye ya n’imi. Ihe ga-enyere anyị aka ka anyị ghara iburu ụdị ọrịa a bụ ịkwọ aka mgbe niile. Ịdị ọcha nwekwara ike inye aka gbochie ọrịa ndị dị ka nimonịa na afọ ọsịsa. Kwa afọ, ọrịa abụọ a na-ata isi ihe karịrị nde ụmụaka abụọ, ndị na-erubeghị afọ ise. Ndị mmadụ nwekwara ike igbochi ọrịa Ebola ma ọ bụrụ na ha ana-akwọ aka mgbe niile.
E nwere oge anyị na-ekwesịghị iji ịkwọ aka gwurie egwu ma ọ bụrụ na anyị achọghị ka anyị na ndị ọzọ bute ọrịa. Anyị kwesịrị ịkwọ aka anyị n’oge ndị a:
Anyị nyụchaa nsị.
Anyị wapụchaa nwatakịrị napkịn ma ọ bụ anyị nyechaara ya aka ka ọ nyụọ nsị.
Tupu anyị etee ọnyá ọgwụ nakwa mgbe anyị techara ya.
Tupu anyị agaa leta onye ọrịa nakwa mgbe anyị si na nke ya pụọ.
Tupu anyị amalite isi nri, tupu anyị ekupụta ya ma ọ bụ tupu anyị amalite iri ya.
Anyị zechaa uzere, kwachaa ụkwara, ma ọ bụ anyị zichaa ime.
Anyị metụ anụmanụ ma ọ bụ nsị ya aka.
Anyị wụfuchaa ahịhịa.
Na-akwọ aka gị nke ọma. A chọpụtala na ọtụtụ ndị anaghị akwọ aka ma ha nyụchaa nsị. Ọ bụrụgodị na ha akwọọ ya, ha anaghị akwọ ya nke ọma. Olee otú anyị kwesịrị isi na-akwọ aka?
Buru ụzọ kwọsa mmiri n’aka tupu gị etewe ya ncha.
Kwọọ aka gị abụọ ka ncha ahụ gbaa ụfụfụ. Saa azụ aka gị, agbata mkpịsị aka gị niile, ghụchaakwa mbọ gị.
Kwọwa ya ruo tịnkọm tịnkọm iri abụọ ma ọ́ dịghị ihe ọzọ.
Jiri mmiri dị ọcha ṅachaa ya.
Jiri ákwà dị ọcha hichaa ya.
Ọ bụ eziokwu na ihe ndị a esighị ike omume, ma ime ha na-egbochi ọrịa nwere ike igbu mmadụ.
2 JIRI MMIRI DỊ MMA NA-EME IHE Ọ BỤLA Ị NA-EME
N’Obodo ụfọdụ, ọrụ ụfọdụ ndị na-arụ n’ezinụlọ bụ ịgbata ezigbo mmiri ga-ezuru ha. Ma, ihe ụfọdụ nwere ike ime ka mmiri dị n’obodo ghara ịdị mma ọṅụṅụ. O nwere ike ịbụ oké ifufe, ide mmiri, paịpụ mmiri gbawara agbawa, ma ọ bụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụrụ na a gbanye mmiri n’ebe na-adịghị mma ma ọ bụkwanụ na mmiri e nwere adịghị mma, o nwere ike ịkpatara mmadụ ọrịa ndị dị ka ọgbụgbọ na ọnyụnyụ, ịba ọcha n’anya, afọ ọsịsa, taịfọd, na ọrịa ndị ọzọ jọgburu onwe ha. Kwa afọ, afọ na-asa ihe dị ka otu ijeri mmadụ na narị nde asaa. Otu n’ime ihe na-akpata ya bụ ịṅụ mmiri na-adịghị mma.
E nwere ọtụtụ ihe anyị nwere ike ime ka anyị ghara ibute ọrịa ma ọ bụ ka ọrịa ghara inye anyị nnukwu nsogbu
Ụzọ ndị mmadụ kacha esi ebute ọgbụgbọ na ọnyụnyụ bụ ma ọ bụrụ na nsị onye bu ya enwee otú o si metụ nri mmadụ chọrọ iri ma ọ bụ mmiri ọ chọrọ ịṅụ. Ọ bụrụ na e nwere ihe mere ka mmiri unu ghara ịdị mma ọṅụṅụ, gịnị ka ị ga-eme ka ị ghara isi na ya bute ọrịa?
Mmiri unu na-aṅụ aṅụ, nke unu ji asa ezé, nke unu ji asa efere na ihe ndị ọzọ, ma ọ bụ nke unu ji esi nri kwesịrị ịdị mma. Unu kwesịrị ịna-esi n’ebe a gbapuru mmiri dị mma agbata mmiri. Ị chọọ ịzụ mmiri a gbanyere ná mkpọ̀, gbaa mbọ zụrụ nke ezigbo ụlọ ọrụ mepụtara.
Ọ bụrụ na ị chọpụta na e nweela ihe mere ka mmiri unu ghara ịdị mma ọṅụṅụ, sie ya n’ọkụ. I nwekwara ike ịtanye ya ọgwụ e ji eme ka mmiri dị ọcha.
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịtanye klorin ma ọ bụ ọgwụ ọzọ e ji eme ka mmiri dị ọcha ná mmiri, tanye ya otú ndị mere ya si kwuo.
Jiri ezigbo ihe e ji aza mmiri na-aza mmiri gị.
Ọ bụrụ na o nweghị ọgwụ ị ga-eji mee ka mmiri gị dị ọcha, i nwere ike ịtanye ya blich. Tanye ya ugboro asatọ n’otu galọn mmiri ma ṅagharịa ya nke ọma. Hapụ ya ihe dị ka nkeji iri atọ tupu gị ejiri ya mewe ihe ị chọrọ iji ya eme.
I tanyechaa mmiri ọgwụ ya adị ọcha, gbanye ya n’ihe dị ọcha, kwuchiekwa ya ekwuchi.
Ị chọọ ikuru mmiri n’ihe ị na-agbanye mmiri, jiri ihe dị ọcha kuru ya.
Kwọọ aka gị tupu gị ekuru mmiri. Amanyekwala aka ná mmiri a na-aṅụ aṅụ.
3 ERILA IHE Ọ BỤLA Ị HỤRỤ
Anyị kwesịrị ịna-eri nri na-edozi ahụ́ ka ahụ́ gbasie anyị ike. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịna-eri nri na-edozi ahụ́, anyị ekwesịghị ịna-eri naanị otu ụdị nri. Erila oké nnu, oké mmanụ, na oké shuga. Na-ata mkpụrụ osisi, na-erikwa akwụkwọ nri. Ị chọwa ịzụ bred, osikapa, na nri ndị ọzọ dị ka ha, gụọ ihe e dere n’ahụ́ ha ka ị mara ihe e ji mee ha ka i nwee ike ịzụrụ nke a na-agwagbughị agwagbu n’ihi na ndị a na-agwagbughị agwagbu na-aka enye ihe n’ahụ́. Atala oké anụ ma ọ bụ oké àkwá, kama na-ata azụ̀ ugboro ole na ole n’izu. N’ebe ụfọdụ, e nwedịrị ike inweta akwụkwọ nri na-enye mmadụ otu ihe ahụ anụ na àkwá na-enye n’ahụ́.
Ọ bụrụ na ị na-ara oké shuga ma ọ bụ na-eri ihe ndị nwere abụba, o nwere ike ime ka i buo oké ibu. Kama ịna-aṅụ ihe ndị na-atọ bịrịbịrị, na-aṅụ mmiri. Na-ata mkpụrụ osisi kama ịna-eri ihe ndị na-atọ oké ụtọ. Mara otú i si eri ihe ndị nwere abụba, dị ka anụ, bọta, ihe ndị e ghere eghe, na chiiz. I siwe nri, jiri ezigbo mmanụ sie ya.
Iri oké nnu nwere ike ịkpatara mmadụ ọbara mgbali elu. Ọ bụrụ na ị na-enwe ọbara mgbali elu, gbalịa na-eri ihe na-enweghị oké nnu. I nwere ike iji ihe ndị ọzọ mee ka nri gị dị ụtọ kama ịna-ejikarị nnu.
Anyị ekwesịghị ịna-eri oké nri. N’ihi ya, afọ ju gị ma ị na-eri nri, i kwesịghị iriri na-aga.
Ọ bụrụ na e sighị nri nke ọma ma ọ bụ dowe ya n’ebe dị mma, o nwere ike ịkpata ọrịa. N’afọ ọ bụla, otu onye n’ime mmadụ isii ọ bụla nọ n’Amerịka na-ada ọrịa n’ihi ihe o ritere ná nri. Ọtụtụ n’ime ha na-agbake, ma ụfọdụ na-anwụ. Gịnị ka anyị nwere ike ime ka anyị ghara irite ọrịa ná nri?
Tupu gị ejiri akwụkwọ nri siwe nri, saa ya nke ọma n’ihi na o nwere ike ịbụ na a wụrụ nsị anụ ma ọ bụ fetilaịza n’ebe a kụrụ ya.
Tupu gị esiwe nri, jiri ncha na mmiri ọkụ saa aka gị, bọọdụ i ji ebe ihe, ebe ị ga-edowe ihe ị na-esi, ite i ji esi nri na efere.
Ihe ndị dị ka àkwá ndụ, anụ, ma ọ bụ azụ̀ a na-esighị esi nwere ike ime ka nri e sirila esi ghara ịdị mma oriri. N’ihi ya, etinyela nri n’ihe i tinyeburu àkwá ndụ, azụ̀ ma ọ bụ anụ ndụ ma ọ bụrụ na ị saghị ihe ahụ asa.
Gbaa mbọ sighee ihe ọ bụla ị na-esi esighe, tinyekwa ndị nwere ike imebi ngwa ngwa na friji ma ọ bụrụ na ị chọghị iri ha ozugbo.
Wụfuo nri ọ bụla gbara ụka.
4 NA-EMEGA AHỤ́
Taa, ọtụtụ ndị anaghị emega ahụ́. Ma, anyị kwesịrị ịna-emega ahụ́ n’agbanyeghị afọ ole anyị dị ka ahụ́ na-agbasi anyị ike. Gịnị mere i kwesịrị iji na-emega ahụ́? Imega ahụ́ ga-eme:
Ka ị na-ehi ụra nke ọma.
Ka ị dị gara gara.
Ka ọkpụkpụ gị sie ike.
Ka ị ghara ibu oké ibu.
Ka obi na-adị gị mma.
Ka ị dịtee ndụ aka.
Ọ bụrụ na ị naghị emega ahụ́, o nwere ike ime:
Ka ị rịa ọrịa obi.
Ka ị rịa ọrịa shuga.
Ka ị rịa ọbara mgbali elu.
Ka abụba ju gị ahụ́.
Ka i nwee strok.
Afọ ole mmadụ dị na otú ahụ́ ya dị ga-ekpebi otú ọ ga-esi na-emega ahụ́. N’ihi ya, tupu gị ekpebie ụdị nke ị ga na-eme, gakwuru dọkịta ka ọ gwa gị ụdị nke ga-adị gị mma n’ahụ́. E nwere ndị tụrụ aro na ụmụaka na ndị ka na-eto eto kwesịrị ịna-eji, ma ọ dịkarịa ala, otu awa emega ahụ́ kwa ụbọchị. Ha kwukwara na ndị torola eto kwesịrị iji awa abụọ na ọkara eme ya kwa izu ma ọ bụrụ na ọ bụ ụdị nke na-esighị ike. Ma ya bụrụ nke siri ike, ha kwesịrị imeru ya otu awa na nkeji iri na ise.
Na-eme ihe ọ bụla na-atọ gị ụtọ iji megaa ahụ́. I nwere ike ịgba bọl, ịkụ basketbọl, ịkụ tenis, ịgba ọsọ, ịgba ígwè, ịwa nkụ, igwu mmiri, ma ọ bụ gị emee ihe ndị ọzọ nwere ike ime ka ahụ́ kporo gị ọkụ. Olee otú ị ga-esi ama ụdị mmega ahụ́ siri ike na nke na-esighị ike? Ị na-eme nke na-esighị ike, naanị ọsụsọ ga na-agba gị. Ma, ọ ga-ara gị ahụ́ ịgwa onye ọzọ okwu mgbe ị na-eme nke siri ike.
5 NA-ARAHỤ ỤRA NKE ỌMA
Awa ole onye torola eto kwesịrị ihiru ụra aharughị ka awa ole ụmụaka kwesịrị ihiru ụra. Ụmụaka a mụrụ ọhụrụ nwere ike ịrahụ ụra ruo awa iri na isii ma ọ bụ awa iri na asatọ n’ụbọchị. Ndị nke na-amụ ije na-ehiru ụra ihe dị ka awa iri na anọ, ebe ndị nke na-amalitebeghị akwụkwọ na-ehiru ihe dị ka awa iri na otu ma ọ bụ iri na abụọ. Ndị nke torurula ịga akwụkwọ kwesịrị ihiru ụra awa iri. Ndị ntorobịa kwesịrị ihiru awa itoolu ma ọ bụ iri, ebe ndị torola eto kwesịrị ịrahụru awa asaa ma ọ bụ asatọ.
I kwesịrị ịgba mbọ na-ehi ezigbo ụra. Ndị dọkịta kwuru na ịrahụ ụra nke ọma na-eme:
Ka ụmụaka na-eto nke ọma.
Ka anyị na-amụta ihe ọhụrụ, gharakwa ịna-echefu ihe.
Ka ihe ndị dị n’ahụ́ mmadụ na-arụ ọrụ nke ọma, onye ahụ agharakwa ibu oké ibu.
Ka obi na-arụ ọrụ nke ọma.
Ka anyị ghara ibute ọrịa.
A chọpụtala na ọ bụrụ na mmadụ anaghị ehi ụra nke ọma, ọ ga-amalite ibu oké ibu. O nwekwara ike ime ka obi na-ajọ mmadụ njọ, ka mmadụ na-arịa ọrịa obi ma ọ bụ ọrịa shuga. O sokwa n’ihe mere ndị mmadụ ji enwe ihe mberede. N’ihi ya, anyị kwesịrị ịna-arahụ ụra nke ọma.
Gịnị ka i nwere ike ime ma ọ bụrụ na ị naghị ehi ụra nke ọma?
Gbaa mbọ na-alakpu mgbe i kpebiri na ị ga na-alakpu, na-etetakwa mgbe i kpebiri na ị ga na-eteta.
Mee ka ebe ị na-ehi ụra gbaa itiri, ekwekwala ka ụzụ dịrị ya. Emela ka ọ na-ekpo oké ọkụ ma ọ bụ na-ajụ oké oyi.
Adịla na-ekiri tiivi ma ọ bụ na-apị ekwentị ma ọ bụ ihe ndị yiri ya ma ị chọwa ịlakpu.
Mee ka àkwà ị na-edina na-adị gị mma n’ahụ́.
Ị chọwa ịlakpu, erila nri na-anaghị agbari ngwa ngwa ma ọ bụ ihe ọ bụla nwere ike ịchụ mmadụ ụra, aṅụkwala mmanya na-aba n’anya.
Ọ bụrụ na i mechaa ihe ndị a ma ị naghị arahụ ụra nke ọma ma ọ bụ na ụra na-atụkarị gị ma i mewe ihe dịịrị gị n’ụbọchị ma ọ bụkwanụ na ọ na-esiri gị ike iku ume ma ị nọrọ n’ụra, ọ ga-adị mma ka ị gaa hụ dọkịta.
NA-ELEZI ONWE GỊ ANYA
O nwere ihe ụfọdụ nwere ike ikpebi ma ahụ́ ọ̀ ga-adị mmadụ mma ma ọ bụkwanụ na ahụ́ agaghị adị ya mma. O nwere ike ịbụ otú ihe si sie ike n’obodo ya ma ọ bụkwanụ ya abụrụ na nri, mmiri, na ihe ndị ọzọ dị mkpa adịghị. Mgbe ụfọdụ, mmadụ agaghị emeli ihe ọ bụla gbasara ihe ndị a. Ma n’agbanyeghị otú ihe si dịrị anyị, anyị ga-emeli ụfọdụ ihe ndị e kwuru n’isiokwu a. Ime ha ga-adaba n’ihe otu nwoke ma ihe kwuru n’oge ochie. Ọ sịrị: “Onye maara ihe bụ onye hụrụ ọdachi gaa zoo.”—Ilu 22:3.
Baịbụl kwuru, sị: “Ọ dịghị onye bi na ya nke ga-asị: ‘Ana m arịa ọrịa.’” (Aịzaya 33:24) * Ihe a Baịbụl kwuru na-akasi ndị mmadụ obi. Ka ọ dị ugbu a, na-eme ihe ọ bụla dị mma i nwere ike ime iji hụ na ahụ́ dị ma gị ma ndị ezinụlọ gị mma.
^ para. 82 Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu gbasara nkwa a na nkwa ndị ọzọ Chineke kwere anyị na Baịbụl, biko gụọ akwụkwọ bụ́ Gịnị n’Ezie Ka Bible Na-akụzi? Ọ bụ Ndịàmà Jehova bipụtara ya. I nwekwara ike ịga na jw.org/ig.
Gụọ ihe Baịbụl kwuru nke nyerela nde kwuru nde mmadụ aka ibi ezigbo ndụ.